ဤလောက၌ ရန်ပြုသူကို ရန်ပြန်တုန့်ပြန်ခြင်းဖြင့် ရန်ငြိမ်းသွားသည်ဟု တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မရှိခဲ့ဘူးပေ။ ရန်မတုန့်ပြန်မှသာ ရန်ငြိမ်းသွားလေသည်။ ဤကား ရှေးအစဉ်အလာဖြစ်သော သဘောတရားဖြစ်ပေသည်။ (ဓမ္မပဒ၊ ယမက၀ဂ်)
Hated is, indeed, never appeased by hatred in this world. It is appeased only by loving-kindness. This is an ancient law. (Dhammapada-Yamakavagga)
ဦးဇင်းမနေ့က ကေလနိယတက္ကသိုလ်သွားပြီး ဒေါက်တာအကြိုတန်းဖြစ်တဲ့ M.phil ကျမ်းတင်ရန်အတွက် The analyses of the universal characteristic of preserving five precepts. Buddhist social aspect: A Study of its Origin and Development in Relation to the Sutta and Vinaya Pitakas. A study of Buddhist attitude of social aspects and their philosophyဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်(၃)ခုကို ပါမောက္ခဆရာအား မိမိရေးချင်တဲ့ခေါင်းစဉ် ရမရကို သွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
Posted by ဆန်နီနေမင်း at 12:23 PM0comments Links to this post